Ma haysataa qorshaha ganacsiga? | Suubbis Blog
Qorshaha ganacsiga waa qalab muhiim u ah ganacsatada. Qorshaha Ganacsiga ma ahan oo kaliya inuu ka caawiyo Ganacsatada oo aay xoogga saaraan talaabooyinka gaarka ah ee lagama maarmaanka u ah inay u yeeshaan fikradaha ganacsiga inay guuleystaan, laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa sidii ay u gaari lahaayeen ujeeddooyinkooda gaaban iyo ujeedadooyinka fog fog.
Haddii aadan ku guulaysan inaad qorsheyso sameysato, waxaad qorsheyneysaa inaad ku guuldareysato.
Hantidhowrka beeraha iyo horjoogaha Silicon Valley Eugene Kleiner ayaa mar qeexay in qorista qorshe ganacsi uu kugu qasbo feker kalii ah. Fikrad ayaa laga yaabaa inay weyn tahay, laakiin markaad hoos u dadagto faahfaahinta iyo lambarrada, iyo wax yabo kale ayeey kukala duwanaan karaan.
Inkasta oo qorshe ganacsi uu gabi ahaanba lagama maarmaan u yahay ganacsiga, ma aha ganacsade kasta oo u baahan baahida loo qabo. Dad badan ayaa raba in ay qorsheeyaan qorshahooda. Dhab ahaantii saxan, waxaa jira qoraalo badan oo online ah oo ku andacoonaya in qorshaha ganacsiga uu ku habboonayn ganacsiyo qaar.
Qaar badan oo ka mid ah khabiirada maalgelinta ganacsiga, waxay isku raaceen in fikrad ganacsi oo wanaagsan ayan kugu filneyn. Xitaa fikradaha ganacsi ee aadka u fiican waxay noqon karaan kuwo aan faa’iido lahayn haddii aadan sameyn karin, Waa hadii aadan fulineynin oo hirgelineynin qorshe istaraatiijiyadeed oo ku saabsan fikradda ganacsigaaga.
Haddii aad raadineyso inaad lacag ka qaadato maalgashadayaasha hay’adaha iyo bixiyeyaasha, maskaxda ku hay in qorshaha ganacsiga wanaagsani uu aad u qiimo badan yahay. Waa inaad ku dadaashaa inaad haysato qorshe ganacsi oo si fiican loo diiwaangeliyey oo ka hadlaya laftiisa waxa uu yahay . Waxay ubaahantahay in ay noqodo qorashahada mid cad oo sahlan in la akhriyo oo la fahmo.
Haddii aan la go’aamin ama aad qorsheynin qorsha ganacsi, waxaa jira ballan iyo rajo keliya; laakiin ma jiro qorshooyin ku saxan. Ka hor inta aanad qorin qorshe ganacsi, waa muhiim inaad tixgeliso laba arrimood oo muhiim ah –
Yaa akhristuhu noqon doonaa?
Tusaale ahaan, haddii aad xiiseyneyso kor u qaadida caasimadda, waxay u badan tahay in maalgashadayaashu ay noqdaan kuwo shaqeysanaa. Haddii aad xiiseyneyso iskaashiga ama shirkadaha wadajirka ah, wada-hawlgalayaasha ganacsiga ee dhici doona waxay noqon doonaan kuwa dhagaystayaasha ah oo ku dhageysan doona.
Maxaad doonaysaa in jawaabtooda ay noqoto?
Iyadoo ay ku xiran tahay dhageystayaashaada bartilmaameedka, in aay diiradda saari fariinta muhiimka ah ee aad doonayso inay helaan si ay u helaan jawaabta aad rabto.
Afar sababaha aad ugu baahan tahay qorshe ganacsi
Inaad lacag u uruuriso ganacsigaaga
Maalgaliyeyaasha suurtagalka ah ama deyn bixiyeyaasha waxay doonayaan qorshe ganacsi oo qoran ka hor inta aysan ku siin lacag. Tilmaamaha kaliya ee fikradda ganacsigaagu kuma filna. Taa oo isbeddelkeeda, aad hubso inaad haysato ganacsi iyo qorshe maaliyadeed oo buuxa oo muujinaya suurtogalnimada guusha iyo inta aad u baahan tahay ganacsigaaga si aad u qaadato lacagta.
Si aad u sameyso go’aano Saxan
Ganacsi ahaan, qorshe ganacsi wuxuu kaa caawinayaa inaad qeexdo oo aad diirada saarto fikradaha ganacsiga iyo xeeladaha ganacsiga. Ma aha oo kaliya inaad xoogga saarto arrimaha maaliyadeed, laakiin sidoo kale arrimaha maareynta, qorsheynta kheyraadka aadanaha, tiknoolajiyada iyo abuurista qiimaha macaamiisha.
Si laguugu caawiyo aqoonsiga daciifnimadaada
Haysashada qorshe ganacsi waxay kaa caawineysaa inaad cadeeysid fikradahaaga. Waxa kale oo aad la wadaagi kartaa qorshaha dadka kale kuwaas oo ku siin kara fikradahooda iyo talooyinkooda. Aqoonso khabrada iyo xirfadlayaasha dadka ku siiyaan talooyin qaali ah, una wadaagaan qorshahaaga iyaga.
Si aad fikradahaaga ula xiriiriso daneeyayaasha
Qorshaha Ganacsiga waa qalab isgaadhsiin ah oo aad isticmaali karto si aad u hubiso raasumaalka maalgashiga hay’adaha maaliyadeed ama amaahda. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu qanciyo dadka in ay ka shaqeeyaan ganacsigaaga, si ay u helaan deynta alaab-qeybiyeyaasha, iyo inay soo jiidato macaamiisha iman kara.
Abuuritaanka qorshe ganacsi waxaa ku jira fikrado badan. Waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxa aad rabto inaad sameyso, oo u isticmaasho barta bilawga ah. Uma baahnid inaad noqoto mid adag. Mawduuca asaasiga ah waa qorshahaagu waa inuu ogaadaa meesha aad hadda joogtid,iyo halka aad rabto in ganacsigaaga aad garsiiso, iyo sida aad u heli doonto.
ma damaanadqaadi kartid guusha, laakiin waxay ku socon kartaa hab wakhti dheer ah oo lagu yaraynayo khatarta kenta fashilka.